Chii chinonzi Kusava Nemusangano Kukuremedza? | Martech Zone
Ini handikwanise kukuudza kangani ini ndanga ndiri pamusangano wekufona iyo yaive yakazara kutambisa nguva. Kunyangwe yaive glitchy software, vasaiti vasina kugadzirira, kana njodzi yekuteerera, inopambadza nguva yakawanda nezviwanikwa. Uye zvirokwazvo hazvibatsire kana ini ndonzwa sekuti izvi zvinoitika kupfuura makumi matatu muzana yenguva.
Musangano wega wega - online kana uri-munhu - inzvimbo inochengetwa nekambani yako munguva, mari uye zviwanikwa. Kunyangwe hazvo mari inoshanduka ikave yakanaka - kana kukosha kuchipfuura mutengo - zvinoenderana nemhedzisiro yemusangano.
Wanga uchiziva here kuti mabhizimusi madiki ari kushandisa pamusoro $ 37 bhiriyoni pagore pamisangano isingakoshi? Funga nezvazvo kweminiti. Pese paunenge ugere mumusangano usingabatsiri, kambani yako iri kurasikirwa nemari. Uye ini ndingashinga kubheja kuti yakawanda yemisangano yaunopinda inoonekwa seisina zvibereko. Saiye muridzi webhizinesi, izvi zvinoita kuti ndinyungudike.
Nemari yemari inoshandiswa pamisangano isina zvibereko gore rega rega, zvinoshamisa kuti vashoma vari kuedza kugadzirisa dambudziko. Iwe une zvirevo here zvekuti misangano inofanira kuitiswa sei? Musangano wese une chinangwa here? Vanhu vari kuendesa nekutevera mushure memisangano? Kana iwe ukapindura "kwete" kune chero mumwe wemibvunzo iyi, saka inguva yekuwongorora zvakare kuti misangano inoitwa sei mubhizinesi rako.
Mabhizinesi mazhinji haana zano rekuti imarii yavari kushandisa pamisangano isina zvibereko gore rega. Takashanda neyedu kubatana tekinoroji anotsigira ReadyTalk kugadzira inokubatanidza macalculator ayo anokuratidza chaizvo kuti uri kushandisa zvakadii uye nemusangano usinganetsi urikudhura Kune zvimwe zvakawanda zvinonaka, tarisa yavo zvinoshamisa raibhurari yekushandisa.
Edza ReadyTalk's Weak Conferencing Calculator nekudzvanya iyi link iripazasi, uye tanga kugadzirisa yako misangano izvozvi!
Shandisa Yakaneta Konferensi Calculator
Kuzivisa: ReadyTalk mutengi we DK New Media!
Tags: audio musanganokarukuretamusangano wekufonamusangano wekushambadzirakugadziriramusangano wevhidhiyowebinar chikuva